चार तला माथिबाट खसेका विकलाई नोबेलले बचायो (भिडियाे रिपाेर्ट सहित) | Makalukhabar.com
असाेज २८, बिराटनगर । चार तला माथिबाट खसेर मरणासन्न अवस्थामा पुगेका धरानका देव विकलाई परिवारका सदस्यले बचाउँन सक्ने आश मारिसकेका थिए । शरीरका बिभिन्न भागमा गंभीर चोट लाग्नुका साथै मृगौलासमेत छेडिएर बाहिर निश्किदा २४ बर्षीय विकको अवस्था चिन्ताजनक थियो । रक्ताम्य अवस्थामा रहेका उनलाई उद्धार गरेर धरान स्थित वीपी कोईराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याईयो । तर, त्यहाँ उपचार हुँन नसक्ने भन्दै डाक्टरले रिफर गरेर पठाएपछि परिवारका सदस्य झन अत्तालिए ।
आफ्नो सांसद पक्राउप्रति राजपाले भन्यो– ‘काउन्टर तोडफोड गरेको होइन, बिरामीको पीडा सहन नसकेर सामान्य रुपमा आक्रोशित भएको हो’
जटिल बन्दै डा. केसीको स्वास्थ्य
कार्तिक २४, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि निरन्तर लड्दै आएका डा. गोविन्द केसी अहिले १७ औं पटक अनशन बसिरहेका छन् । डडेल्धुराको अजयमेरुमा अनशन बसेका डा. केसीको अनशनको सातौँ दिनसम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि डडेल्धुरा अस्प... जारी राख्नुहोस...